Olee otú Tinye ndepụta okwu na iMovie 08/09/11 - Tinye ederede ka iMovie
iMovie abịa na ọtụtụ sobtaitel ekwekọghị n'ihi na ị na-eme ka ọkachamara achọ aha mmetụta maka gị iMovie videos. E nwere ọtụtụ ihe mere ị chọrọ ka ịgbakwunye ndepụta okwu gị videos ma na fim, ihe atụ, ị ebudatara a video si YouTube dị na German na ịchọrọ ịgbakwunye ndepụta okwu na Bekee ka ya na ndị enyi gị nwere ike ịghọta ya. Ma ọ bụ na i mewo ka a n'ụlọ nkiri na chọrọ tinye ndepụta okwu na iMovie ịgbakwunye ụfọdụ pụrụ iche mmetụta na atụ gị na fim. Ma ọ bụ nanị chọrọ tinye ụfọdụ mmechi Ebe e si nweta. Agbanyeghị, ndepụta okwu bụ mgbe ụfọdụ mkpa ma dị mkpa maka ezi nkiri. Na-agbakwụnye ndepụta okwu ka ihe nkiri na iMovie dị nnọọ mfe. Ugbu a na-eso nzọụkwụ tinye ndepụta okwu na iMovie.
Part 1: Olee ịgbakwunye ndepụta okwu ka vidiyo na iMovie
Part 2: An mfe ụzọ tinye ndepụta okwu ka vidiyo na Mac
Nzọụkwụ 1. y'otú iMovie oru ngo
Biko mee n'aka na ị malitere ihe iMovie oru ngo. Gaa Njikwa> New Project ịgbakwunye a ọhụrụ oru ngo. Ịdọrọ obere vidiyo si omume nchọgharị iji oru ngo.
Nzọụkwụ 2. họrọ otu aha ịke na-etinye ya n'ọrụ
Họrọ T maka Aha si menu mmanya. Ịnwere ike ihuchalu a aha ịke site na-akpụ akpụ gị òké n'elu ya. Họrọ onye ị ga-amasị itinye na ịdọrọ ya n'elu gị oru ngo na ebe ị chọrọ ka tinye a aha.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye ndepụta okwu n'etiti obere vidiyo, ịdọrọ ịke ruo mgbe a green mmanya n'ihu ndị clip. Mgbe ị hapụ gị òké, a Background window ga-gbapụta, na-arịọ gị ka ị na-ahọrọ ndabere maka gị ndepụta okwu. Họrọ ndabere na-amasị gị, na ị ga-ahụ ndepụta okwu egosipụta n'ime Project.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye ndepụta okwu ka a video dị ka caption, ị nwere ike dị nnọọ ịdọrọ ẹbọ ebe ị chọrọ ka ịgbakwunye ndepụta okwu. Ị adịghị mkpa ịhọrọ a ndabere agba, dị ka utu aha ga-tọrọ n'elu Clip.
Nzọụkwụ 3. Tinye ederede n'ihi na gị utu aha
Gị ederede ga-pụta ìhè ugbu a na-ekiri ma ị nwere ike ịgbanwe ya ka ihe ọ bụla ị ga-amasị. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe font ịke nke ndepụta okwu, ị nwere ike ịga Gosi Akara ókwú> Gbanwee Akara ókwú ịgbanwe font agba, ịke, size, ihu, wdg
N'ihi na ndepụta okwu n'etiti obere vidiyo, ị nwere ike ihuchalu ya na ya na a ga-emere ka nke a:
N'ihi na ndepụta okwu na obere vidiyo, ị ga-ahụ ya dị ka nke a:
Nzọụkwụ 4. ịgbanwe oge
Ugbu a ị kwukwara ndepụta okwu ka iMovie oru ngo na vidiyo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe oge nke gị iMovie ndepụta okwu, ị nwere ike abụọ-pịa na aha clip na-agbanwe Duration na soja ma ọ bụ, dị nnọọ ịdọrọ ihe mmịfe na oru ngo ịgbanwe ya ọnọdụ na oge.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mfe na ngwa ngwa tinye ndepụta okwu gị video faịlụ, ọzọ dị ike video edezi tool- Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac) na-atụ aro. Ọ na-akwado dị iche iche video formats dị ka MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, ASF, MOV, F4V, M4V, mpg na ndị ọzọ, otú ị na-adịghị mkpa iji tọghata ha ka ha iMovie akwado formats. Ugbu a nwere a ngwa ngwa-agụ banyere otú ịgbakwunye ndepụta okwu eji ngwá ọrụ a. Mụtakwuo >>
Nzọụkwụ 1. Mbubata gị faịlụ
Mgbe-agba ọsọ a software, họrọ "16: 9" ma ọ bụ "4: 3" iwu ọhụrụ oru ngo. Mgbe ahụ kpọmkwem ịdọrọ-n-dobe gị foto ma ọ bụ vidiyo gaa na kwekọrọ ekwekọ track. Ebe a a media nchọgharị bụ n'ihi na ị na conveniently na-faịlụ site na gị iTunes Ọbá akwụkwọ, iMovie, wdg ..
Nzọụkwụ 2. Add ma hazie ndepụta okwu
Mgbe ahụ, see "Dezie" button na-aga "Text" taabụ ka ịhụchalụ nyere aha ịke. Họrọ onye na-amasị gị na abụọ Pịa tinye ya na video faịlụ. Mgbe ahụ abụọ pịa ederede igbe ịbanye gị okwu ma ọ bụ ịgbanwe Font, size na agba gị akụkụ.
Nzọụkwụ 3. Export gị faịlụ na ndepụta okwu
Mgbe agbakwunye ndepụta okwu, pịa "Export" ịzọpụta gị faịlụ. E nwere ụzọ anọ n'ihi na ị na-ahọrọ: "Ịmepụta Video", "exporting ka Ngwaọrụ", "na-ebugote ka gị tube" na "Burning DVD". Họrọ ụzọ ị chọrọ ịzọpụta ma ọ bụ ịkọrọ gị videos na pịa "Mepụta".
> Resource> iMovie> Olee otú iji Tinye ndepụta okwu ka Videos na Movies na iMovie